China Ugqiba mveliso kunye nabenzi | Khokela
Unyango lomphezulu bubuso bezinto ze-substrate ukwenza umaleko kunye ne-matrix yoomatshini, iipropathi zomzimba kunye neekhemikhali zomaleko womgangatho wenkqubo. Injongo yonyango lomphezulu kukuhlangabezana nokumelana nemveliso, ukunxiba ukumelana, umhombiso okanye ezinye iimfuno ezikhethekileyo zomsebenzi. Kuba iindawo machining metal, iindlela ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo zonyango lunyango lusila ngoomatshini, unyango lweekhemikhali, unyango lobushushu ngaphezulu, ukutshiza umphezulu, unyango lomphezulu yindawo yokucoca indawo yokusebenza, ukucoca, ukuphazamisa, ukuya kwioyile, ukwehla njalo njalo.
Yintoni ukugqitywa kwensimbi yoshishino?
Ukugqitywa kwesinyithi ligama eliquka konke elisetyenziselwa ukuchaza inkqubo yokubeka uhlobo oluthile lokubhinca isinyithi kumphezulu wenxalenye yentsimbi, ebizwa ngokuba yi-substrate. Inokubandakanya ukuphunyezwa kwenkqubo yokucoca, ipolishi okanye enye indlela yokuphucula umphezulu. Ukugqitywa kwensimbi kuhlala kubandakanya i-electroplating, eyinkqubo yokufaka ion zentsimbi kwi-substrate ngombane wombane. Ngapha koko, ukugqitywa kwesinyithi kunye nocingo ngamanye amaxesha kusetyenziswa ngokungafaniyo. Nangona kunjalo, ishishini lokugqiba isinyithi libandakanya uluhlu olubanzi lweenkqubo, nganye inikezela ngezibonelelo zayo zomsebenzisi.
Ukugqitywa kwesinyithi kwimizi-mveliso kunokusebenza ngeenjongo ezininzi ezibandakanya:
● Ukunciphisa ifuthe lomhlwa
● Ukukhonza njengengubo yokuqala ukukhuthaza ukunamathela kwepeyinti
● Ukomeleza i-substrate nokwandisa ukuxhathisa kokunxiba
● Ukunciphisa ifruse
● Ukuphucula ukubonakala kwenxalenye
● Ukwandisa ukuthengiswa
● Ukwenza umphezulu uqhube ngombane
● Ukuphucula ukuxhathisa kweekhemikhali
● Ukucoca, ukucoca kunye nokususa iziphene kumgangatho
Iindlela zonyango ezingaphezulu
Ukuqhuba izixhobo zokumisa ezikumgangatho ophezulu ngesantya esinokuhlengahlengiswa ngokukodwa sokupolisha ngokugqibeleleyo indawo yokusebenza.
Inkqubo yokuqhawula kunye nokucoca i-Ultrasonic yamacandelo amancinci.
Ngeenkqubo ezizodwa, umphezulu wangaphakathi wemibhobho ethe tye, eqhelekileyo kunye nencitshisiweyo unokuphuculwa.
Ngale nkqubo, umgangatho wobuso obalaseleyo unokufezekiswa kuxhomekeke kwinto yokuqala.
Indawo yokusebenza ibekwe kwisitya esinamavili okusila. Ukushukuma okunyanzelekileyo kubangela ukuba imiphetho kunye neendawo ezinoburhabaxa zisuswe, ngaloo ndlela kuphuculwa umgangatho wobuso.
Pearl yesanti kunye neglasi
Ukuxubusha, ukurhabaxa, ulwakhiwo okanye umphezulu wokulinganisa. Kuxhomekeka kwiimfuno, imithombo yeendaba eyahlukeneyo yokuqhushumba kunye nokuseta iiparameter zinokwenzeka.
Ukubumba i-Electropolishing yinkqubo yokususa i-electrochemical kunye nomthombo wamandla wangaphandle. Kwi-electrolyte ehlengahlengiswe ngokukodwa kwimathiriyeli, loo nto inyanzelisiwe isuswe kubugcisa obuza kwenziwa ngomatshini.
Oku kuthetha ukuba into ebuntsimbi yenza i-anode kwiseli ye-electromechanical. Isinyithi sikhetha ukunyibilika kwiindawo ezingalinganiyo ngenxa yeencopho zoxinzelelo. Ukususwa kwe-workpiece kwenziwa ngaphandle koxinzelelo.
Ukuncitshiswa koburhabaxa bomhlaba, ukuphuculwa kokumelana nokubola komhlaba, ukujikeleza okuhle.
Ukufakwa kombane kunokusetyenziswa kuphela kumphandle wangaphandle wee-cannulas.
Ubungakanani benxalenye bukhawulelwe kubuninzi. 500 x 500 mm.
Apha ngezantsi ikakhulu kugqityiwe esihlala sithatha:
Okulandelayo: Imizi-mveliso yesicelo